Sida loo dar Album Art in Music ku iPhone
> Resource > iPhone > Sidee ayaan ku dari kartaa Album Art on My iPhone
Waxaa laga yaabaa inaad maktabadda weyn oo music aad iPhone oo laga cabsado in ay dhagaystaan ​​music aad jeceshahay ku dhaqaaqo. Si kastaba ha ahaatee, ma ahan mar walba farxad marka ururinta music waa kala daadsan iyo wareer macluumaad aan dhammeystirneyn iyo farshaxanka album maqan.
Ayaa ka maqan tahay album gaar ahaan waa mid keena in igu waalan. Tan iyo farshaxanka album ah waa waxa goosin ka mid ah music dhamaystiran oo farxad leh ka dhigaa, si aan jeclahay in aan qabto waxa la heli karaa. Si kastaba ha ahaatee, waxa ay dhab ahaantii gumaarka ah inay gacanta ku daro tahay album in song kasta iPhone adigoo isticmaalaya Lugood. Sidaas, sababta ma ha barnaamij shaqo oo aad u? Waxaa jira barnaamijyo badan oo suuqa lagu beegsanayo iyo ma ahan kugu adag tahay inaad ka heli mid ka mid ah. Halkan waa waxa ugu wanaagsan ee ka shaqeeya i-ee Wondershare TidyMyMusic u Mac ( TidyMyMusic Wondershare ). Hore Waxaad isticmaali kartaa barnaamijkan ku darto farshaxanka album dhammaan music ee maktabadda Lugood aad ka dibna lagu wareejiyo si aad iPhone Raaxo fiican. Halkan waa sida loo sameeyo:
Download barnaamijkan si loo soo dajiyo aad Mac. Marka aad u furo, waxaa si toos ah iskaan doonaa maktabadda Lugood iyo dar oo dhan music si ay saxaarad faylka hoos nidaamsan Lugood.
2 Raadi farshaxanka album ee dhammaan music ah
Tag madax ee suuqa hoose iyo ka heli badhan Scan. Sax checkbox ee Search for Songs Allaha oo guji badhanka Scan. Markaas barnaamijkan ka heli kartaa dhammaan macluumaadka u heesaha, oo ay ku jiraan magacyada track, fannaaniin, iyo lyrics of arts album dabcan.
Fiiro gaar ah: Haddii aad sax ku checkbox ee Search for labalaabka Songs, barnaamijka ayaa sidoo kale ka heli kartaa oo dhan tus ka ah maktabadda Lugood aad.
3 dar farshaxanka album in files music ah
Dooro mid ka mid ah hees iyo hubi tahay ay album khaanadda saxda ah. Markaas riix batoonka Codso ayaa salka ku jira in lagu daro tahay album muusikada. Inta lagu guda jiro geeddi-socodka, dhammaan macluumaadka kale oo sidoo kale loo gundhig karaa in faylka.
Fiiro gaar ah: Waxaad ka bedeli kartaa tahay album haddii aad jeceshahay. Guji Edit icon ee khaanadda saxda ah iyo jiidi image maxali ah si ay u meel tahay albumka.
4 nidaameed music in aad iPhone
Hadda, aad u hagaagsan kartaa music in aad iPhone sida waxa aad si caadi ah samayn. Ka dib markii in, marka aad muusig aad iPhone, farshaxanka album tusi doonaa.
Ma sugi karaa in ay isku dayaan naftaada? Just download barnaamijkan iyo hadda bilaabi waayo-aragnimo music cajiib ah.